दैनिक एक किलो माटो खान्छिन् यी वृद्धा
न्यूजलय शुक्रबार ०३, माघ २०७६
कोही मानिसको माटो खाने शोक नै हुन्छ । यस्तै विश्वमा एक महिलाले दैनिक एक किलो माटो खाने गरेकी छिन् । उत्तरप्रदेशको एक गाउँमा बस्ने एक ९० वर्षिया वृद्ध सुदामा देवीले दैनिक १ किलो माटो नखाएसम्म उनलाई निन्द्रा नै लाग्दैन ।
उनले १० वर्ष हुदाँ देखि....
थाइल्याण्डमा प्रीयंकाको अर्धनग्न मस्ती
काठमाडौं । थाइल्याण्ड पुगेकी नायिका प्रियंका कार्कीले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अर्धनग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने पक्कापक्की भए ‘ब्याचलोरेट पार्टी’ मनाउन थाइल्याण्ड पुगेकी नायिका कार्कीले उक्त अर्धनग्न फोटो पोष्ट गरेकी हुन् ।
उनले एकदिन अघि मात्रै आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा विमान अगाडि....
ल्यापटपमा निकै महत्वपूर्ण काम गरिरहँदा वा फोनमा कुरा गर्दा धेरैले ब्याट्रिका कारण समस्या झेल्नु परेको होला । एक समयपछि चाहे त्यो ल्यापटप होस् या फोन सबैको ब्याट्रिको क्षमतामा बिस्तारै ह्रास आउने गर्दछ । तर यदि तपाईं केहि कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईंको स्मार्टफोन र ल्यापटपको....
अनुहार बिग्रियो ? लगाउनुहोस् अम्बाको फेस प्याक
चिसो मौसममा पाइने अम्बाको स्वाद निकै मिठो हुन्छ । तर, जाडो मौसममा अम्बालाई स्वादको लागि मात्र नभएर यसलाई अनुहार सफा वा चम्किलो बनाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा पाइने पोषक तत्वले स्वास्थलाई मात्र नभएर छालाका समस्याहरुलाई निर्मुल गर्ने गर्दछ । अम्बामा पाइने भिटामिन सी,....
पत्ता लाग्यो कुखुरा पहिला कि अण्डा ? वैज्ञानिकहरुको यस्तो जवाफ
एजेन्सी । अनुत्तरित प्रश्न ‘कुखुरा पहिला कि अण्डा ?’ को वाफ वैज्ञानिकहरुले ठोस प्रमाणसहित पत्ता लगाएका छन् ।
दुनियाँभर कसैले कुखुरा पहिले कसैले अण्डा भने पनि वास्तविक प्रमाण अघि सार्दै वैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘कुखुराको उत्पति पहिले भयो, अनि त्यसले अण्डा दियो ।’
ब्रिटिश वैज्ञानिकहरु भन्छन्, ‘हामीले....
बिहेपछि महिलामा आउछन् यस्ता परिवर्तन
विवाहपछि महिलामा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा भिन्न परिवर्तन आउने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । विवाहपछि श्रीमानसँग शारीरिक सम्बन्ध रहन्छ । यसकारण शरीर रिप्रोडक्सनका लागि तयार हुन्छ । यस क्रममा महिलाको शरीरमा एस्ट्रोजनलगायतका कैयौँ हर्मोनको मात्रा बढ्न जान्छ । यस्तो हर्मोनले यस्ता शारीरिक तथा मानसिक....
नाताभित्र विवाह गर्दा रोगी बच्चा जन्मिएपछि.....
न्यूजलय बिहीबार २४, पुष २०७६
इन्डोनेशियाको तीन गाउँमा धेरै मानिसहरु एक अचम्मको रोगबाट पिडित भएका छन् । डाउन सिन्ड्रोमका कारण त्यहाँका मानिसहरु बिरामी भएका छन् । नातेदारमा विवाह गर्दा यस्ता रोगी बच्चा जन्मिने हुन्छ । यस्तो रोगका बिरामीलाई पशुलाई जस्तै जन्जिरले बाँधेर राखिने गरिएको पाइन्छ ।
तीन गाउँका चार सय....
चिसो मौसममा कोठालाई यसरी न्यानो राख्नुहोस्
पछिल्लो समय मुलुकभर अत्यधिक चिसो बढेको छ । यस्तो समयमा धेरैलाई चिसो सम्बन्धी समस्याले सताइरहेको हुनसक्छ । चिसोबाट बच्नका लागि आफ्नो घर, कोठालाई न्यानो पार्न केही उपाय अपनाउनुपर्छ ।
– भान्छामा खाना पकाउँदा ताप उत्पन्न हुन्छ । जसले घरलाई न्यानो बनाउन सक्छ । त्यसैले यदि....
कपालमा चाया पर्यो ? यसरी हटाउनुहोस्
प्रायः जाडो मौसममा कपालमा धेरै चाया पर्ने गर्छ । जसले गर्दा मानिसको लुक्समै असर परिरहेको हुन्छ । आफू जति नै स्मार्ट देखिएर हिडेपनि कपालमा चाया देखियो भने इमेज खराब हुन्छ । त्यसैले कपालमा चाया पर्दा धेरैलाई चिन्ता हुन्छ ।
कपाल सुख्खा भयो या तालु चिलायो....
यी युवतीसंग विवाह गर्नेलाई १२ सय करोड
हङकङको एक अरबपति व्यापारीको छोरीसँग विवाह गर्नेलाई १२ सय करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । तर, शर्त भने आश्चर्यको छ । सेसिल चाउ को छोरी जिगी चाउको विवाह अगाडी नै गर्न खोजेका थिए । छोरीले विवाह गर्न नमानेपछि उनी हैरान भए । यस पटक भने....